हिरोसंग किन यस्तो कम्प्रमाईज ? छवि ओझाको फिल्मको गीतमा यस्ता हिरो | News Filmy
हिरोसंग किन यस्तो कम्प्रमाईज ? छवि ओझाको फिल्मको गीतमा यस्ता हिरो
हेर्नुुस् मंगलमको दोश्रो गीत
नाच्न जान्नु मात्र हिरोमा हुने तत्व हैन त्यो कुरा छवि ओझा जस्ता मेकरले कहिले बुझ्लान यहाँ ? हो हिरो छनोटमा निकै कम्प्रमाईज गर्दै छवि ओझाले बनाएको नयाँ फिल्म मंगलमको दोश्रो गीत हेर्दा हिरो माथि प्रश्न उठाउँने ठाउँ धेरै देखिएको छ ।
अभिनय र नृत्यमा निकै पोख्त रहेकी हिरोइन शिल्पा पोखरेलसंग एउटै फ्रेममा पृथ्वी राज प्रसाईलाई नचाउँदा छवि ओझाको यो गीत आयो गयो अनि हरायो हुने अवस्था ज्यादा छ । किन कि दर्शकले मेकर मात्र हैन एक्टर पनि हेर्दछन् र सोही अनुसार फिल्म हेर्ने निर्धारण पनि गर्दछन् ।
छवि ओझाले यो फिल्ममा नयाँ हिरो पुष्प खड्का पनि लिएका छन् जो संग खिचिएको गीत पर्ख पर्ख मायालुले सांगितिक बजारमा निकै पकड बनाउँन सफल भएको छ । उक्त गीतले फिल्मको ब्यापार पनि बढाउँने सम्भावना देखाईसकेको छ । तर सार्वजनिक नयाँ गीतमा नाच्न चाँहि जान्ने परन्तु लुक निकै सामान्य भएका हिरोलाई हेर्दा छवि ओझाको फिल्मको ब्यापारिक भविष्य अलमलमा पार्दिने हो कि भन्ने डर उत्तिकै देख्छौ हामी । पर्ख पर्ख मायालु … हेर्नुस् तल
सार्वजनिक नयाँ गीतको भिजुअल क्वालिटी पनि सामान्य छ तर अडियो भर्सन चाँहि केही स्ट्रोङ छ । सुन्दै जादा यो गीतमा नाच्न चाँहि मन लाग्न सक्छ । तर के गर्नु गीत हेर्नका लागि पनि हो त्यस माथि समय सापेक्ष क्यूट र ह्याण्डसम हिरोहरुको भिड बढ्दै गर्दा यी हिरोलाई दाज्ने हो भने उनी हिरो जस्ता लाग्दैनन् फगत कुनै क्यारेक्टर आर्टिष्ट भन्दा माथि पृथ्वी राज प्रसाई नदेखिएको हुँदा छवि ओझाले आगामी फिल्ममा हिरो छनौट जस्तो गहन पक्षलाई नजरअन्दाज नगरेकै राम्रो ।
सिधा भन्ने हो भने म मेकर हुँ , मैले जे गरेपनि राम्रो हुन्छ र यहाँ चल्छ भन्ने भ्रम आजै बाट उनले फ्याकिदिएको राम्रो । यसो गर्दा उनको बुढेसकालको फिल्मी यात्रा र उनीसंग जोडिन पुगेकी हिरोइन शिल्पा पोखरलको पनि स्टारडम यथावत रहनेमा दुई मत नरहला ।
नवल नेपालको निर्देशन रहेको मंगलम आगामी फाल्गुन २५ देखि देशब्यापी प्रर्दशनमा आउँदैछ । सार्वजनिक गीतको शब्द रचना लेखु सहयात्रीको हो भने संगीत दीपक शर्माको र स्वर प्रमोद खरेलको हो । कोरियोग्राफी चाँहि कविराज गहतराज हो । हेर्नुस् मंगलमको दोश्रो गीत र तपाईलाई पनि हिरो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जनाउँनुस ।